Dowladda oo war saxaafadeed ka soo saartay duqeyntii Xarardheere | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowladda oo war saxaafadeed ka soo saartay duqeyntii Xarardheere
Dowladda oo war saxaafadeed ka soo saartay duqeyntii Xarardheere
Dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saartay duqeyn 12-kii bishan ka dhacday duleedka degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug, kaasoo la sheegay in lagu dilay ku dhowaad 60 ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab.
War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya oo gacan ka heleysa saaxibo caalami ah howl gal qorsheysan lagu beegsaday Saldhig Al-Shabaab ku laheyd degmada Xarardheere.
Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa war saxaafadeed uu soo saaray maalmod ka hor waxaa uu ku sheegay in duqeynta ay ku dileen 60 dagaalame.
Dawladda Soomaaliya oo gacan ka helaysa Saaxiibo Caalami ayaa agaasintay hawlgal qorshaysan oo lagu beegsaday Saldhig ay Argagixisada Alshabaab ku lahayd agagaarka Degmada Xarardheere ee Gobalka Mudug.
Hawlgankaan oo si wanaagsan ula kulmay ujeedadii laga lahaa ayaa lagu dilay ku
dhawaad 70 ka tirsan Alshabaab kuwaas oo isku diyaarinayay weeraro argagixiso oo ay
ku waxyeelaynlahaayeen Shacabka Soomaliyeed.
Dadka ku dhintay hawlgalkaan waxaa ku jira Horjoogayaal sarsare oo kuwo ku
takhasusay maleegista falalka waxyeelaynta maatida ee Kooxdu ku mashquulsantahay,
mana jirto waxyeelo soo gaartay Shacabka Soomaaliyeed maadaama bartilmaameedku
ahaa Sal-dhig ay isku uruursanayeen Maleeshiyada Shabaab.
Dawladda Soomaaliya waxeey u mahadcelinaysaa Bulshada Deegaanka iyo Saaxiibada caalamiga ah oo la’aantood aanu suurtagal noqdeen hawlgalkaan.
Dawladdu iyada oo kaashanaysaa Shacabkeeda iyo saaxiibada Caalamiga ah waxeey xaqiijinaysaa in ay ka go’antahay sii labanlaabista Weerarada Kooxaha Sharwadayaasha ah ee ku hawlan in ay waxyeeleeyaan Shacabka Soomaaliyeed.
Dawladda Soomaaliyeed waxeey ugu baaqaysaa Qaybaha kala duwan ee Shacabka Soomaaliyeed in ay ka qaybqaataan Dagaalka ka dhanka ah Kooxaha Nolol-diidka ah, sidoo kale waxeey ka codsanaysaa Saaxiibada Caalamiga ah in ay sii kordhiyaan garab- istaagooda Dawladda iyo shacabka Soomaaliya si looga guulaysto Argagaixisada Soomaaliya ku nuumanaysa.